ရွာလုံးကျွတ် စတုဒိသာကျွေးပြီး ကထိန် အလှူကြီးကို ခြိမ့်ခြိမ့်သည်း လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Askstyle
ရွာလုံးကျွတ် စတုဒိသာကျွေးပြီး ကထိန် အလှူကြီးကို ခြိမ့်ခြိမ့်သည်း လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ႏိုင္ငံေက်ာ္ အႏုပညာ႐ွင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခိုင္ႏွင္းေဝက ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြကိုပါ စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခိုင္ႏွင္းေဝက မေန႔က တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ေလးမွာ ေနျပည္ေတာ္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္ သုခရတနာေက်ာင္းတိုက္ မွာ ကထိန္ခင္း အလွဴႀကီးကို ၿခိမ့္ၿခိမ့္သည္း က်င္းပခဲ့ ပါတယ္။ ခိုင္ႏွင္းေဝက သူမရဲ႕ အလွဴေလးနဲ႔ ပက္သတ္ၿပီး အခုလိုပဲ ေျပာျပလာပါတယ္။
“ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကထိန္အလွဴေတြျပဳလုပ္ ခဲ့ေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ သမီးေလးရႊန္းရႊန္း အပါအဝင္ သား,သမီးေတြ အားလံုးအတြက္ ကုသိုလ္ဒါနျပဳလုပ္ေပးရတဲ့အတြက္ ေျပာျပလို႔မရေအာင္ဝမ္းသာမိပါတယ္။ ယခုဘဝမွာ ကြ်န္မရဲ့ သား,သမီးေတြအျဖစ္ သူတို႔ေလးေတြေရာက္လာၾကတယ္. သူတို႔ အတြက္ ကြ်န္မလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အရာေတြထဲက ဒါနကုသိုလ္ နဲ႔ ပညာအေမြကို အျပည့္အဝေပးႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါမယ္။”
“ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ကံတရားေလးေတြေကာင္းမြန္ေအာင္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြအၿမဲျပဳ လုပ္ေပးျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုေတြအမ်ားႀကီး တင္ထားရတာကေတာ့ ကြ်န္မရဲ႕ သား,သမီးေတြကို သူတို႔နားလည္သိတတ္တဲ့အရြယ္ေရာက္ရင္ ျပန္ၿပီးျပႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ၊”
“အခုလိုလွဴဒါန္းႏိုင္ေအာင္ ပါဝင္ ကူညီလွဴဒါန္းေပးတဲ့ ေမာင္ေလးဇင္ျမင့္ေအာင္ကိုလည္းေက်းဇူးတင္သလို, ညီမေလး ေအးမို႔မို႔ေမာင္(ခ)အိဖူးဖူးေမာင္လဲ ေကာင္းရာမြန္ရာဘံုဌာနကို ထပ္မံတက္လွမ္းႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ေနာ္။ ယေန႔ျပဳလုပ္ရေသာ ကထိန္ အလွဴေတာ္ မဂၤလာႀကီးကို မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုးကိုလည္း အမွ် အမွ် အမွ်ေပးပါတယ္။ သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ၾကပါေစရွင္။”
ခိုင္ႏွင္းေဝကေတာ့ ဘာလုပ္လုပ္ ေစတနာ အျပည့္နဲ႔ လုပ္ကိုင္တတ္သူ တစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ခိုင္ႏွင္းေဝ ရဲ႕ အလွဴေလး ကိုၾကည့္ၿပီး ပီတိျဖစ္ သာဓုေခၚႏိုင္ၾကပါေစေနာ္။
နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေက ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကိုပါ စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက မနေ့က တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့လေးမှာ နေပြည်တော်၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ် သုခရတနာကျောင်းတိုက် မှာ ကထိန်ခင်း အလှူကြီးကို ခြိမ့်ခြိမ့်သည်း ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက သူမရဲ့ အလှူလေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကထိန်အလှူတွေပြုလုပ် ခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ သမီးလေးရွှန်းရွှန်း အပါအဝင် သား,သမီးတွေ အားလုံးအတွက် ကုသိုလ်ဒါနပြုလုပ်ပေးရတဲ့အတွက် ပြောပြလို့မရအောင်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ယခုဘဝမှာ ကျွန်မရဲ့ သား,သမီးတွေအဖြစ် သူတို့လေးတွေရောက်လာကြတယ်. သူတို့ အတွက် ကျွန်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေထဲက ဒါနကုသိုလ် နဲ့ ပညာအမွေကို အပြည့်အဝပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။”
“ရှေ့ဆက်ပြီး လျှောက်လှမ်းရမယ့် သူတို့ရဲ့ ကံတရားလေးတွေကောင်းမွန်အောင် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမြဲပြု လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေအများကြီး တင်ထားရတာကတော့ ကျွန်မရဲ့ သား,သမီးတွေကို သူတို့နားလည်သိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်ရင် ပြန်ပြီးပြနိုင်အောင်လို့ပါ၊”
“အခုလိုလှူဒါန်းနိုင်အောင် ပါဝင် ကူညီလှူဒါန်းပေးတဲ့ မောင်လေးဇင်မြင့်အောင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်သလို, ညီမလေး အေးမို့မို့မောင်(ခ)အိဖူးဖူးမောင်လဲ ကောင်းရာမွန်ရာဘုံဌာနကို ထပ်မံတက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ ယနေ့ပြုလုပ်ရသော ကထိန် အလှူတော် မင်္ဂလာကြီးကို မိတ်ဆွေများ အားလုံးကိုလည်း အမျှ အမျှ အမျှပေးပါတယ်။ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေရှင်။”
“၁.ကထိန်ပဒေသာပင်များ (စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ၂၉သိန်း။ ၂.သိမ်ဆောက်လုပ်ရန် ကျပ်သိန်း၅၀။ ၃.ရေကန်နှင့်အမိုး ၁၀သိန်း။ ၄. ပင့်သံဃာအပါး၂၀အား တစ်ပါးလျှင် ၃သောင်းကျပ်ဖြင့် ၆သိန်းကျပ်။ ၅.နံနက်ပိုင်း ကောက်ညှင်းပေါင်းနှင့်အကြော်။ ၇.ထမင်းနှင့်ဟင်း စတုဒိသာကျွေးမွေးခြင်း။ ၈.အချိုရည်ဗူးများ။ ၉.ကလေး အယောက် ၅၀၀ အတွက် Mituပေါင်ဒါဗူး,ရေချိုးဆပ်ပြာ,အရုပ်များ။ ၁၀. ဘုရား ၁၉ ဆူ စသည်တို့ကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။”ဆိုပြီး သူမရဲ့ ကုသိုလ်လေးကို မျှဝေလာပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ဘာလုပ်လုပ် စေတနာ အပြည့်နဲ့ လုပ်ကိုင်တတ်သူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့ အလှူလေး ကိုကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ် သာဓုခေါ်နိုင်ကြပါစေနော်။